'Beekumsaafi muuxannoo rakkoo hawwaas-dinagdee furan biyya galchuu feena' - Barattoota Oromoo Tarkii - BBC News Afaan Oromoo
'Beekumsaafi muuxannoo rakkoo hawwaas-dinagdee furan biyya galchuu feena' - Barattoota Oromoo Tarkii
Barattoonni Oromoo biyya Tarkii rakkoo hawaas-diinagdee biyyaa bifa qorannoo irratti hundaa'een furuuf abjuufi karoora gurguddoo baafatanii sochii eegaluu isaanii BBC'tti himan.
Waldaa Qorannoofi Misoomaa Odaa hundeessuun caayaa tokko jalatti gurmaa'anii sochiitti kan galan barattoonni kunneen, rakkoo hawaas-diinagdeen alattis Afaaniifi Aadaa Oromoo addunyaan wal barsiisuuf qorannoo adda addaa hojjachuuf karoora qabaachuu himu.
Waldaan kun barattoota Oromoo muummeewwan barnootaa adda addaan carraa barnootaa argatanii biyya Tarkiitti barachaa jiran 150 ol ta'aniin hundaa'e.
Barattoonni kunneen waggaa tokko darbeef leenjii gahumsa cimsachuufi hogganummaa adda addaa erga walii kennaa turanii booda, Caamsaa 21 bara 2018 waldaa kana ijaaruu direektarri waldichaa Juneeydii Waliyyii, (kaadhimamaa PhD) BBC'tti himaniiru.
Yaadni waldaa kana hundeessuu bara 2017, namoota miliyoona 1 ta'an naannoo Somaalee irraa buqqa'aniif deeggarsa walitti qabuuf sochii taasifameen akka eegale dubbatu.
Gargaarsi hanga har'aa rakkina keessaa nu hin baasne kan jedhan Obbo Juneeydiin, 'nama qurxummii kennuufiirra, akka qurxummii itti qabu barsiisuutu caala akkuma Chaayinoonni jedhan, nama dandeettii haa goonfachiifnuu jennee waldaa kana dhaabne jedhu.
Kanaafis pirojektoota gurguddoo 10 ol rakkoolee hawaasaa furuu danda'an of bocanii harkaa akka qabaniifi qaamolee mootummaafi miti mootummaa biyya Tarkiifi Itoophiyaa waliin hojii eegaluu dubbatu.
Waggaatti barattoonni Oromoo 100 ta'an carraa barnootatiin gara biyya Tarkii dhufa, humna barate jabaa kana gurmeessuun biyyaaf waa gumaachuun kaayyoo waldichaati jedhu walitti qabaan boordii waldaa kanaa Abdallaa.
Tarkiin waggaa 15 hin caalle keessatti of jijjiirte kan jedhan Dr. Abdulfattaan, barattoonni barnoota isaaniitti dabalataan muuxannoo biyyatti gara biyyaa akka geessan yaada qabaachuu dubbatu.
Kaanaan dura rakkoo siyaasaa biyya keessa tureenis wal qabatee, barattoonni barnoota isaanii xumuranii gara biyyaatti hin deebi'an ture jedhu.
Biyya Tarkii keessa teeknoolojiin sasalphaa jiruuf jireenya qonnaan bultoota keenyaa jijjiiruu danda'u hedduutu jira jedhu Obbo Juneeydiin.
"Qonnaan bulaan keenya tiraaktaraafi kombaayinara bitachuuf humna hin qabu. Biyya kanatti ammoo maashina xixiqqaa qonnaan bulaan harkaan qabatee ittii qotuu danda'u hedduutu jiru. Sana fayyadamnee biyya keenya keessatti waa hedduu fooyyessuu dandeenya."
Gama biraan ogeeyyiin qonnaa Itoophiyaa irraa gara Tarkii deemanii leenjiifi muuxannoo wayyaa'aa addaa addaa yoo argatan galanii qonnaan bultoota barsiisuu danda'u, sanaaf sagantaalee adda addaa qopheessuuf yaada qabaachuullee himu.
Teeknoolojii ijaarsaafi to'annoo dhangala'aa magaalotaanis muuxannoo biyyi kun ittiin beekamtu hedduutu jira jedhu.
Gama fayyaanis barnootaafi yaalaa gaariitu jira, kana gara biyya keenyaatti dabarsuu barbaanna jedhan.
Yuunivarsiitotaafi magaalotaa, akkasumas dhaabbilee adda addaa biyyoota lamaanii gidduutti hariiroo uumuun beekumsaafi muuxannoo wal jijjiiruun akka jiraatu hojjennas jedhu.
'Garaaf ganaan hiddan dhiigni bayuu hin didu'
Wantoota karoorfatan kana hojiitti jijjiiruufi qabatamaan lafarratti jijjiirama mul'atu fiduuf gahumsi guddaan waldaan kun qabu humna nama barateeti jedhu Obbo Juneydiin.
Ogeeyyiin fayyaa, saayinsii hawaasaa, injinariingii fi kkf hedduu kan barnootarra jiraniifi barnoota xumuranii biyya Tarkiitti hojiirra jiran hedduu qabna jedhu.
Beekumsi erga jiraate, sana gara humna maallaqaatti jijjiiruun ni danda'ama jedhu.
"Uummanni keenya akka haalaan irratti hirmaatu feena, gama kaaniin ammoo aadaafi afaan biyya Tarkii barannee dhaabbilee biyyattii deeggarsa namaa godhuu danda'an waliin hariiroo gaarii uumnee jirra, waadaas nuuf galanii jiru," jedhu.
"Garaaf ganaan hiddan dhiigni bayuu hin didu," akka jedhan sanii jedhu.
Karoorri keenya, mul'anni keenya guddaa tahus, waan xixiqqaa irraa eegallee suuta suuta guddachaa deemna kan jedhan ammoo Dr. Abdulfattaadha.
Dhaabbileen invastimantii Tarkii gara biyya Itoophiyaa deemanii akka hojjetan, akkasumas hariiroon dippiloomasii biyyoota lamaanii akka jabaatus gamanumaan hojiin eegalamera jedhu.
Dhaabbilee biyya keessa jiran waliin hariiroo uumuun akka hojjetaniifi yeroo gabaabaa keessatti biyyatti waajjira banatanii socho'uuf yaada qabaachuus ni dubbatu.